Ny Konferansa Iraisam-pirenena & Expo momba ny vy eto Masstricht, Netherland
Niditra tamim-pahombiazana tamin'ny fihaonambe & Expo an'izao tontolo izao izahay tany Masstrict, Netherland tamin'ny 26th-28 novambra 2019. Ary ny vokatray dia noderain'ny mpandray anjara erak'izao tontolo izao.
Taorian'ny fanavaozana 60 taona sy ny fampandrosoana vaovao, ny Canton Fair dia nahatanty fanamby isan-karazany ary tsy tapaka mihitsy. Ny Canton Fair dia manatsara ny fifandraisan'ny varotra amin'i Shina sy izao tontolo izao, mampiseho ny endrik'i Shina sy ny zava-bitan'ny fampandrosoana. Io no sehatra tsara indrindra ho an'ny sinoa e ...
Famaritana ny fantsom-by tsy misy fangarony mahazatra ho an'ny balustrade
38mm X 38mm ho an'ny bala kely, 51mm X 51mm na 63mm X 63mm ho an'ny bala lehibe, matevina dia 1.5mm ka hatramin'ny 2.0mm
Ny vy vy SS316 dia matetika ampiasaina amin'ny lalamby apetraka akaikin'ny farihy na ranomasina. SS304 dia fitaovana mahazatra indrindra ao anaty na any ivelany. Toy ny naoty amerikanina AISI fototra, ny fahasamihafana misy eo amin'ny 304 na 316 sy 304L na 316L dia ny atin'ny karbôna. Ny haavon'ny karbaona dia 0,08% ambony indrindra ...
China Fair and Export Fair, fantatra ihany koa amin'ny hoe "Canton Fair", naorina tamin'ny 1957. Niara-niasa tamin'ny Ministeran'ny Varotra PRC sy ny Governemantam-bahoaka ny faritanin'i Guangdong ary nokarakarain'ny China Foreign Trade Center, dia atao isaky ny lohataona ary ny fararano any Guangzhou, Sina. Canton Fair dia ...
Fetin'ny haingon-trano fanorenan-trano iraisan'i Sina (Guangzhou) faha-17
Mpikarakara: Ivon-toeran'ny varotra ivelany any Sina (Vondrona) / Fikambanan'ny haingon-trano ho an'ny trano firoboroboan'ny orinasa China: Fampiroboroboana ny varotra ivelany any Guangzhou, General Corp. TotalScale: 380.000 metatra toradroa fampirantiana: mpitsidika mihoatra ny 2.400: manodidina ny 140.000 no tafiditra ao amin'ny foibe fivarotana varotra any ivelany (Group), izay isdirectl. ..
Fampirantiana vy sy metaly vy atsimo faha-10 an'ny China South
Mpikarakara: Chengzhan Exhibition Service Co., Ltd. Fifandraisana: Andriamatoa Chu Adiresy ： Efitra 1008, tranobe 1, tranobe birao Hengfu Iraisam-pirenena, làlana 11 Jihua, Distrikan'i Chancheng, Tanàna Foshan, Faritanin'i Guangdong (PC: 528000) Ny taona tamin'ny lohataona . Ary tsy tokony hisy fotoana very amin'ny asa fandraharahana ...
Handrails, Takelaka fototra Handrail, Fametahana Handrail mitsangana, Handrail amin'ny vy mahery, Tohatra Handrail Bracket, Handrail vy tsy miova,